ColorsaModerate Deutan Cannot See - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား🛌👀
Iris က Mini ကို
Iris က OS က
Iris က FLOSS
Iris က Wayland များအတွက် FLOSS
Iris က Buy
PayPal ကအတူ Buy
မြီစား / Credit Card ကိုအတူ Buy
Bitcoin နှင့်အတူ Buy
ယနေ့တွင်, color identification is very important as we havealarge number of color signs, designs and many things around us.
Deuteranomaly isared-green color deficiency in which the green cones don’t detect enough green and are too sensitive to yellows, လိမ္မော်သီး, လီဗာပူး, and browns especially in low light.
ရလဒ်အနေဖြင့်, an affected person will face problems to identify these colors and will not be able to differentiate them properly.
အသုံး Vision ၏ software to see the world likeanormal person.
Posted in, ဆောင်းပါးများ
contact@iristech.co · စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ · မှဖန်တီးသည် ဒံယလေသ Georgiev.
ငါတို့သည်သင်တို့ပိုကောင်းတဲ့ browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ, အကြောင်းအရာ personalize နှင့် site traffic ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. ကျနော်တို့ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဘယ်လိုအကြောင်း Read နှင့်သင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်မည်သို့မည်ပုံ "သီးသန့်လုံခြုံရေး Preferences ကို". သင်ဤ site ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်, သငျသညျ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုသဘောတူ.
cookie Settings များ
သငျသညျဘယ် website မဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားသို့မဟုတ် retrieve စေခြင်းငှါ, အများအားဖြင့် cookies တွေကို၏ပုံစံ. ဤအချက်အလက်သည်သင်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သင်ကမျှော်လင့်အဖြစ်သင့်စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်သင့်စက်ကိရိယာနှင့်အများအားဖြင့်ဆိုက်အလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်. သတင်းအချက်အလက်များများသောအားဖြင့်တိုက်ရိုက်သင်ခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ဦးထက်ပိုစိတ်ကြိုက်က်ဘ်ဆိုက်အတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ကျနော်တို့ privacy ကိုရန်သင့်လက်ျာဘက်လေးစားသောကြောင့်, သငျသညျ cookies များကိုအချို့အမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြုမပေးရှေးခယျြနိုငျ. ပိုပြီးထွက်ရှာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ default settings ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မတူညီသောအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ. သို့သျောလညျး, cookies များကိုအချို့အမျိုးအစားများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသင့်ရဲ့ site ကို၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းမှုနိုင်ကြသည်ဝန်ဆောင်မှု impact စေခြင်းငှါ.
အမြဲတမ်း Active ကို
ဤရွေ့ကားကိုလျှောက်လွှာအခမဲ့အသုံးပြုမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုချခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ Iris က website ကိုရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ခဲ့လျှင်သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးပေးဖို့ကူညီ.
PHPSESSID, ဖိတ်ခေါ်, ap_id
ဤရွေ့ကားအသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ခြေရာခံများနှင့်အလားအလာရှိသောပြဿနာများကို detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်. ဤရွေ့ကားကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုသူများကဒီ site ကိုအသုံးပြုဖို့မည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ data တွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီ.
မ, သဘောတူ, 1P_JAR, ဒီမှာ
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, ဂျီပီအက်စ်